Akaebe | Nchọpụta Pụrụ Iche, uslọ Ndị Na-adịghị Ebu Maka Ọrịre
Detuo Homelọ Pụrụ Iche!
Banye Cabins & Rustic Homes
Urcheska ire ere
Ugbo Anyịnya na Ugbo
Njirimara ndị ọzọ na-adịghị ọcha maka ire ere
Home » nleba
Anya ukwu Brenda na karịa m na-atụ anya. Obi dị m ụtọ na m wee gafee ebe nrụọrụ weebụ gị!
Matt (Onye nnọchite anya)
Ndewo, Brenda I chọrọ ime ka ị mara na anyị nabatara onyinye ahụ n'ụlọ anyị na anyị agaghị achọ ndepụta ahụ na Nchọpụta Pụrụ Iche. Daalụ nke ukwuu maka ịrụsi ọrụ ike gị na ịre ahịa ihe onwunwe ụwa. Echiche kachasị mma maka ịga n'ihu na saịtị gị.
Carl (Onye nwe ụlọ)
Atụghị m anya ka ị rụsie ọrụ ike maka ihe o furu m. Daalụ. Are bụ classy ụlọ ọrụ.
Sam (Onye nwe ụlọ)
CHAỊ! Nsonaazụ ahụ masịrị m. Daalụ nke ukwuu!
Pat (Onye nwe ụlọ)
A ga-emechi ụlọ anyị na Fraịde! 🙂 Daalụ maka ihe niile i mere. O nyeere m aka site n'ịgwa m ka "hapụ". O siiri ya ike!
Bethany M (Onye nwe ụlọ)
Nke a bụ usoro dị mfe ma enwere m ekele maka enyemaka gị niile!
Dustin B (Onye nwe ụlọ)
Anya mara mma dị ka mgbe niile!
Okwukwe L. (Onye nnọchite anya)
M n'ezie na-ekele gị nlezianya anya ka anyị na ndepụta na ị 🙂
Angela B (Onye nwe ụlọ)
Ọzọ ị na-arụ ọrụ dị ịtụnanya!
Julie D. (Onye na-ere ahịa ahịa)
Daalụ maka iguzosi ike n'ezi ihe gị na maka ọrụ ị nọrọ na faịlụ m.
Guy L. (Onye nwe ụlọ)
Ị mara mma! Ndi na erere m ihe i mere!
Meg L. (Onye nnọchite anya)
Naanị m hụrụ ụzọ ị si etinye ibe gị ọnụ. Na-ewepụta oge iji gụọ ma nwee mmetụta na iwere ihe ndị dị elu. Nke ahụ dị obere ma na - eme gị ọpụrụiche! Anyị na-agọzi inwe gị. Daalụ nke ukwuu ~
Okwukwe L (Onye nnọchiteanya)
Biophilic Design - Na-agbakwunye ya n'ụlọ gị
Tainlọ Akpa Mbupu